Maxaa ka jira in Xassan Daahir lageeyay Madaxtooyada Soomaaliya si looga saro fikirka uu aaminsanyahay? | warsugansomaliya.wordpress.com
Warar aan leesku haleyn Karin ayaa waxa ay sheegayaan in maanta Xassan Daahir Aweys la geeyay Madaxtooyada Soomaaliya si uu kulan ula qaato madaxda Dowlada qaarkood iyo saraakiil Cadaan ah oo halkaasi ku sugayay.
Xassan ayaa la sheegay in ciidamo tira badan oo kasoo waday halka uu ku xirnaa ay geeyeen madaxtooyada oo sidoo kale ay xaadir ku ahaayeen odayaal ay isku heyb yihiin oo si aad ah ugu doodayay in uu xuriyad helo inkasta oo ay qodob dastuuri ah ku doodeyn.
Wararkaan oo ilaa hadda aan xaqiiqadooda laheyn ayaa waxa ay intaa ku darayaan in sababta Xassan kulanka loogu yeeray ay aheyd qaabkii uu u sheegi lahaa in uu shalay qaldanaa maanta uu doonayo in uu isaga tanaasulo xag-jirnimada arintaas oo isaga ka daadegi la’ maadaama uu afka ka qaadi la’yahay haleys siiyo ciidan aan kula dagaalo Al-Shabaab iyo Cadowga.
Odayaasha la sheegay in ay madaxtooyada kusii sugnaayeen ee Xassan Daahir ay isku heybta ahaayeen sida la sheegayo ayaa waxaa dowladu ugu tala gashay in ay dhinacooda ka tashkiiliyaan Xassan Hadii uu war yeelayo.
Xassan Daahir Aweys oo ah nin in badan kasoo qeyb qaadanayay dagaallo guul darro ku dhamaaday ayaa waxaa uu maalma kahor si dirqi ah uga soo baxsaday Baraawe xilli ay doonayeen in ay qabtaan dagaalamayaal Shabaab ah isaga oo intaa wixiii ka danbeeyayna isu dhiibay maamulka Ximin iyo Xeeb halkaasi oo looga soo dhaadhiciyay in Muqdisho loo soo duuliyo inkasta oo uu wax badan ka dhega adeegay imaatinka Caasimada Soomaaliya.
Si kastaba dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay war-baahinta ka sheegtay in Xassan Daahir Aweys arintiisu ay ku xirantahay hadba go’aanka uu qaato halkaas oo laga dheehan karo in Xassan Daahir uu xarigna dalba karo xoriyadna dalba karo.
← Akhriso qaladaadka ugu badan ay gaalaan Xildhibaanada Baarlamaanka (12-Qodob).
Guddi Baarlamaan oo soo ban-dhigay liiska Magacyo haween Soomali ah ay kufsadeen ciidanka Kenya iyo Raaskabooniyiintu →